ကိုယ်ရေးမယ့်စာက စာအုပ်နဲ့ရေးရင်လည်းစာရွက်တွေက ချိန်သားနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာမှာတောင် အမြင်မလှရှိရော့မယ်လေ။ လက်ရေးတွေကမလှခဲ့တော့ အရာရာမှာ မျက်နှာပမ်းမလှခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကိုတောင်ကိုယ်ပြန်မဖတ်တက်လောက်အောင် လက်ရေးညံ့ခဲ့တယ်။
စာပေအရာမှာလည်း ဖတ်ပါများရင်သိမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ”လယ်ထွန်သွား နွားမေ့”ဆိုတာမျိုးပဲ အသိနဲ့သတိက အမြဲမကပ်နေတက်ခဲ့ပါဘူး။ ရှင်သန်ခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းက မရှိခဲ့လေတော့ အခြားသော ဘဝတွေရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေကို ရှာဖွေကြည့်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေမိခဲ့တယ်။
အမှန်က ကျနော်နေထိုင်ရာ ဘဝအိမ်လေးက အပြင်ပမ်းကြည့်ရင် အေးချမ်းပါတယ်။ အေးချမ်းအောင်လည်းနေတက်ခဲ့တာကိုး။ သို့ပေမယ့် အိမ်ထဲမှာတော့ အမှိက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။ အရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတယ်။ ရှင်းထုတ်ပစ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ရှင်းထုတ်လို့ရတယ်။ သို့ပေမယ့် အမှိုက်တွေကိုရှုပ်ထွေးနေစေတာက ကြိုးတွေကြိုးတွေနဲ့ လှည့်ပတ်ပြီးချဉ်နှောင်ထားကြတာလေ။ ကြိုးတွေရဲ့မာယာအောက်မှာ ရှေ့မတိုးသာနောက်မဆုတ်သာပါပဲ။ တင်းရင်လည်းပြတ်မယ်ဆိုတာတွေပါ။
ရှင်းရင် နှောင်ကြိုးတွေကနေ ရက်စက်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားကြလိမ့်မယ်။ တင်းရင်ပြတ်မယ့်နှောင်ကြိုးနဲ့၊ မရှင်းရင်ရှုပ်မယ့်အမှိုက်မျိုးတွေပါ။ လူတို့မှာ လောဘရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလကားနေလိုချင်တဲ့လောဘကြီးမှုတွေကိုတော့..ဒေါသတကြီးနဲ့ဖြေရှင်းရမှာလားဗျာ။ သူတို့မှာခြေလက်ရှိတယ် ကြိုးစားလို့လည်းရနေတဲ့အသက်အရွယ်တွေ။ သို့ပေမယ့် သူများမကောင်းကြောင်းပဲပြောပြီး ကိုယ့်မကောင်းကြောင်းကျ သူတပါးက တစ်ခွန်းပြောမိရင် အဲ့လူနဲ့ရန်ဖြစ်တက်တဲ့အမျိုး။
ကိုယ်ကပြောတက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြောရင်ခံနိုင်ရည်ရှိရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တဖတ်သတ်စိတ်စွဲ
ဘဝဆိုတာနည်းနည်းလေးခါးမှလည်းအရသာရှိတာမျိုးလေ။ ကျနော့ရဲ့ ဘဝမှာတော့ ခါးသက်သက်အရသာလေးနဲ့ ကြိမ်းစပ်စပ်မျက်လုံးလေးကိုအသုံးပြုရင်း ဆံပင်မဖြူ ခါးမကုံးခင် ကြွားအုံးမှာပါလေ။
ကျနော်က သခင်လည်းမဟုတ်ကျွန်လည်းမဟုတ်သေးတော့ သခင်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါအုံးမယ်ဗျာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်နိုင်သူသာ သခင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။
Steemit အဖွဲ့သားအားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့်...
myanmar busy life story
ခေးက အခု အာဝုရဲ့သခင်. မီးမီး ရဲသခင်လေးပါ ကွီး ရ😂😂
နဲနဲမရေးပါနက် များများလေးရေးပါ :P
ကိုယ်ဆို မူလတန်းတုန်းက လက်ရေးလှလွန်းလို့ ဆရာက ချီးမွန်းတာ ခံရခဲ့တယ်... ပျိုးခင်း ဗျိုင်းကျထားသလိုပဲတဲ့😁😁😁
ပျိုးခင်းဗျိုင်းကျရင် ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ ဟင် ... သေချာမမြင်ဖူးလို့ နားမလည်နေဘူးဖြစ်နေတာ...။ပြောပြပါဦး
အိုလမို ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ ကမိုးဇော် ယေ
သခင် ဦးမိုးဇော်ကြီး ရောက်လာပါပြီခင်ဗျ
ကလုံဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်တယ်၊ လူ့ပြည်မှာ ဘုရားပွင့်ပြီထင်တယ်။
Congratulations @komoezaw! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :